အမျိုးသားကျန်းမာရေးဓါတ်ခွဲဌာနခွဲ – Department of Medical Service
(က) ဓာတ်ခွဲကျွမ်းကျင်ဝန်ထမ်းအဆင့်ဆင့် နေရာချထားခြင်းနှင့် ပြောင်းရွှေ့ခြင်း။
(ခ) ပြည်တွင်း/ပြည်ပသင်တန်းများအတွက် သင်တန်းသားစိစစ်ရွေးချယ်ခြင်း။
(ဂ) ဓာတ်ခွဲကျွမ်းကျင်ဝန်ထမ်းများအား သင်တန်းပို့ချခြင်း။
(ဃ) ဓာတ်ခွဲလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ စီမံချက်များ ရေးဆွဲခြငး်။
(င) နှီးနွယ်သော ဌာနများနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်း။
(စ) အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်း။
(က) ရောဂါဗေဒဆိုင်ရာ ဓာတ်ခွဲစစ်ဆေးမှုများ
(ခ) အဏုဇီဝဗေဒဆိုင်ရာ ဓာတ်ခွဲစစ်ဆေးမှုများ
(ဂ) စံချိန်စံညွှန်းထိန်းသိမ်းခြင်းဆိုင်ရာ ဓာတ်ခွဲစစ်ဆေးမှုများ
(ဃ) အဆင့်မြင့် မော်လီကျူလာ ဓာတ်ခွဲစစ်ဆေးမှုများ
(စ) မူးယစ်ဆေးဝါးနှင့် အဆိပ်အတောက်ဖြစ်စေသော ဓာတုပစ္စည်းများအတွက် ဓာတ်ခွဲစစ်ဆေးမှုများ
(က) ကူးစက်ရောဂါနှင့် ကပ်ရောဂါများ၊ တစ်နိုင်ငံလုံးရှိ Outbreak Samples များ၊ Emerging and Reemerging disease samples များကို (၂၄) နာရီပတ်လုံး ပိတ်ရက်မရှိ လက်ခံစစ်ဆေးပေးနေသော Reference Laboratory ဖြစ်ပြီး WHO ၏ National Level Lab ဖြစ်သည်။
1. National Polio Laboratory ( NPL )
2. National Measles/Rubella Laboratory
3. National Influenza Center ( NIC )
4. JE, Dengue & Chikungunya ရောဂါတို့ကို ရှာဖွေသော Center အဖြစ် ဆောင်ရွက်နေပါသည်။
(ခ) နိုင်ငံတော်အဆင့် အခမ်းအနားများနှင့် ပွဲလမ်းများ
(ဂ) သဘာဝဘေး အန္တရာယ်များ
(ဃ) ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနမှ အခါအားလျော်စွာ ညွှန်ကြားချက်များ
(က) အစည်းအဝေး/အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲများ/စာတမ်းဖတ်ပွဲများ (နိုင်ငံတကာပညာရှင်များ)
(ခ) ဂျာနယ်ဖတ်ခြင်း/ စာတမ်းဖတ်ပွဲများ/ အတွေ့အကြုံ နှီးနှောဖလှယ်ပွဲများ (ပြည်တွင်း/ပြည်ပမှ ပညာရှင်များ)
(ဂ) ဘွဲကြိုသင်တန်းများ/ ဘွဲ့လွန်သင်တန်းများ (ရောဂါဗေဒ/ အဏုဇီဝဗေဒ/ ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးတက္ကသိုလ်/ အရေပြားရောဂါ/ ကာလသားရောဂါ/ ဆေးဘက်ပညာတက္ကသိုလ်သင်တန်းများ) အတွက် သင်တန်းဌာနအဖြစ် ဆောင်ရွက်ခြင်း
(က) ဘွဲ့ကြိုသင်တန်းများ/ ဘွဲလွန်သင်တန်းများ (ရောဂါဗေဒ/ အဏုဇီဝဗေဒ/ ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးတက္ကသိုလ်/ အရေပြားရောဂါ/ ကာလာသားရောဂါ/ ဆေးဘက်ပညာတက္ကသိုလ်သင်တန်းများ) အတွက် သင်ကြားပို့ချပေးခြင်း
(ခ) ဓာတ်ခွဲကျွမ်းကျင်အဆင့်(၃)နှင့်(၄) သင်တန်းသားများအား သင်ကြားပို့ချပေးခြင်း
(ဂ) ပုံမှန်သင်တန်းနှင့် မွမ်းမံသင်တန်းများ ပို့ချခြင်း
(ဃ) နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းအသီးသီးနှင့် ပူးပေါင်း၍ သင်တန်းများနှင့် အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲများ ကျင်းပခြင်း
(က) လက်တွေ့အသုံးချ သုတေသနလုပ်ငန်းများ
(ခ) ဆေးတက္ကသိုလ်အသီးသီးနှင့်ပူးပေါင်း၍ ဆေးပညာမဟာသိပ္ပံနှင့် ပါရဂူဘွဲ့သင်တန်းသားများ၏ သုတေသနစာတမ်းများအား ကူညီခြင်း/ ကြီးကြပ်ခြင်း
(က) တစ်နိုင်ငံလုံးရှိ ဆေးရုံအသီးသီးသို့ လိုအပ်သော ဓာတ်ခွဲခန်းသုံးစက်ပစ္စည်းများ ထောက်ပံ့ပေးခြင်း
(ခ) ဓာတ်ခွဲခန်းသုံးစက်ပစ္စည်းများအား ပြုပြင်ခြင်း/ ထိန်းသိမ်းခြင်း
(ဂ) ဓာတ်ခွဲခန်းသုံးတိရိစ္ဆာန်များအား မွေးမြူခြင်း/ ထိန်းသိမ်းခြင်း/ ထောက်ပံ့ခြင်း
(ဃ) နှီးနှောသောဌာနများနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်း
(င) ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကြီးဌာနမှ ဖွဲ့စည်းသော လုပ်ငန်းကော်မတီအသီးသီးတွင် ပါဝင်ဆောင်ရွက်ခြင်း
(စ) ကာကွယ်ဆေးထိုးခြင်းလုပ်ငန်း (အသည်းရောင်အသားဝါဘီ/ ခွေးရူးရောဂါ/ Yellow Fever)
အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်းများနှင့် လက်ရှိဆောင်ရွက်နေသော လုပ်ငန်းများ
(က) ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့၏ (WHO Work plans) များကို အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။
(ခ) Plan of National Health Laboratory Myanmar, To support IHR implementation (WHO EU Joint Project) – National Laboratory Policy (မူကြမ်း) ရေးဆွဲနိုင်ခဲ့ပြီး၊ National Strategic Plan (မူကြမ်း) ရေးဆွဲနေဆဲဖြစ်သည်။
(ဂ) Health Promotion Project for the Elementary School Children of the Vulnerable Areas around Yangon, Myanmar (2013-2015) ကို (KOICA/CAHP) ကိုရီးယားနိုင်ငံနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။
(ဃ) Improvement of diagnosis, early diagnosis and surveillance of severe respiratory disease ကို (Institute Pasteur) ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံနှင့် I.P. International Network တို့နှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။
(င) SEA encephalitic Project ကို (Institute Pasteur) ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံနှင့် I.P. International Network တို့နှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။
(စ) Implementation HIV-1 RNA viral load, early infant diagnosis and Detection of resistance mutation ကို Foundation Merieux ပြင်သစ်နိုင်ငံ၊ MSF Holland တို့နှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။
(ဆ) Establishment of Quality management system in Myanmar ကို (NRL Australia) နိုင်ငံနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။
(ဇ) Niigata University – National University Cooperation, Niigata University မှ Japan and Myanmar Joint Research Project on Severe Pneumonia in Children နှငွ့ Influenza and Other Respiratory Virus Infections ကို Niigata University၊ ဂျပန်နိုင်ငံနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။
(ဈ) The National Institute of Infectious Diseases (NIID) WHO Collaborating Centre for Influenza – Laboratory Training Course for Influenza Virus Surveillance နှငွ့ PCR Diagnosis ကို NIID ၊ ဂျပန်နိုင်ငံနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။
(ည) National Center for Global Health and Medicine (NCGM) ဂျပန်နိုင်ငံ – “ Molecular epidemiology of multi drug-resistant Gram negative pathogens based on their whole genome sequencing” ကို Niigata University၊ ဂျပန်နိုင်ငံနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။
(ဋ) Burnet Institute, 85 Commercial Road, Melbourne, Australia – Point of Care (POC Test of HIV) များကို အရည်အသွေးစမ်းသပ်ခြင်းကို Burnet Institute ၊ ဩစတြေးလျနိုင်ငံနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။
(ဌ) Antimicrobial Resistance Project (AMR Project) အတွက် AMR Guideline ရေးဆွဲရန် ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့သို့ အဆိုပြုတင်ပြထားပြီးဖြစ်ပါသည်။
(ဍ) Biosafety Guideline ရေးဆွဲရန် ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့သို့ အဆိုပြုတင်ပြထားပြီးဖြစ်ပါသည်။
(ဎ) Sysmex Corporation, Japan နှင့် Sysmex Asia Pacific Pte Limited, Singapore တို့အကြား Cooperation Agreement on The External Quality Assessment Program in the field of Haematology in Myanmar (“ EQA” ) လက်မှတ်ရေးထိုးရန် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။
(ဏ) ADB အထောက်အပံ့ဖြင့် URC Malaria အဖွဲ့ကို National Malaria Control Programe (NMCP) ဖြင့်ပူးပေါင်းကာ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးနှင့် မွန်ပြည်နယ်အတွင်းရှိ မြို့နယ်/တိုက်နယ်ဆေးရုံ ဓာတ်ခွဲခန်းများ အဆင့်မြှင့်တင်ရေးအတွက် ၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လမှစတင်၍ ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။
(တ) International EQAS for participation
HIV Ab, HBs Ag, HCV Ab- National Reference Laboratory, Australia
EQAP for Influenza (seasonal/Avian) – Hong Kong WHO Influenza Reference Lab (since 2008)
WHO EQAP for Polio virus isolation, Polio ITD
WHO EQAP for Measles/ Rubella Serology
WHO EQAP for JE
CDC EQAP for HIV DNA PCR & HIV VL
WHO collaborating Centre, UK NEQAS, Birmingham Quality, PO BOX 3909, BIRMINGHAM B 15 2UE, UK.
Faculty of Medicine Siriraj Hospital, CD4 count Thailand
Syphilis proficiency testing with CDC, Atlanta
GASP (Gonococcal Antimicrobical susceptibility Programme with Prince of Wales Hospital, Australia)
WHO Accredited labs under N.H.L.